कृष्णसिंह लाेथ्याल काठमाडौं, १० जेठ
अझै पनि धेरै मानिसलाई तेक्वान्दो र कराते खेल एउटै हो भन्ने लाग्छ । लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । दुवै खेल खेल्दा लगाइने सेतो रङको ड्रेस ‘गी’देखि हातखुट्टा चलाउनेसम्मको गतिविधि एउटै हुन्छ । त्यसैले धेरै मानिसको नजरमा यी २ छुट्टै विधाका खेल एउटै हन् ।
तर, वास्तविकता छुट्टै छ । यी २ खेल नितान्त फरक खेल हुन् । तेक्वान्दो कोरियन मार्सल आर्ट खेल हो । कराते जापानी मार्सल आर्ट । यति मात्र होइन, यी खेलका नियम सबै फरक छन् ।
कराते हातखुट्टाको खेल हो । तेक्वान्दो खुट्टा र हातको । अथवा कराते खेलमा बढी हातको प्रयोग गरेर प्रतिद्वन्द्वीलाई हराइन्छ, तेक्वान्दोमा ‘किक’ अथवा खुट्टाको प्रयोगले जित्ने हो ।
माथिको प्रसङ्ग किन उठाइयो भन्ने लाग्न सक्छ ? नेपालका तेक्वान्दोबाट नै धेरै कीर्तिमान कायम गरेका खेलाडी दीपक विष्टलाई पनि कुनै दिन तेक्वान्दो र कराते खेल एउटै हो भन्ने लाग्थ्यो ।
उनलाई मार्सल आर्ट खेल मनपरे पनि तेक्वान्दो र कराते कस्तो खेल हो ? ड्रेस कस्तो हुन्छ ? केही थाहा थिएन ।
उक्त सन्दर्भबारे थाहा पाउन २०५२ सालतिर फर्किनुपर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा २०३३ सालमा जन्मिएका तेक्वान्दोका कीर्तिमानी खेलाडी दीपक विष्ट तेक्वान्दो खेल जीवनमा आउनुभन्दा पहिला भलिबलका खेलाडी हुन् । त्यतिखेर उनको उमेरले १८ वसन्त पूरा गरिसकेको थियो ।
भलिबल खेलमा भविष्य नदेखेपछि उनले तेक्वान्दो खेल रोजेका हुन् ।
‘भलिबल खेल छाडेर उत्साहित हुँदै तेक्वान्दो खेल्न त पुगेँ तर तेक्वान्दो खेल्न भर्ना हुने रुपैयाँ पनि थिएन’, विष्ट पुराना दिन सम्झँदै भन्छन्, ‘तेक्वान्दो खेल्न काका डम्बरबहादुर विष्टको स्कुलको घर्राबाट ३ सय रुपैयाँ चोरेर भर्ना भएँ तर खेल्न जाँदा लगाउने ड्रेस थिएन ।’
विष्टले तेक्वान्दो खेल्ने त्यो नियर्णसम्म पुग्दा उनको परिवार महेन्द्रनगरबाट बसाइँ सरेर धनगढी पुगिसकेको थियो । उनले महेन्द्रनगरको सिद्धनाथ साइन्स क्याम्पसबाट आईएस्सीको परीक्षा दिएका थिए ।
धनगढीमा उनका काका डम्बर विष्टले ज्ञान निकेतन बोर्डिङ स्कुल चलाएका थिए ।
पछि त्यही स्कुलमा उनले २ वर्ष शिक्षक भएर पढाउने काम पनि गरे ।
‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भनेजस्तै त्यही स्कुलको घर्राबाट ३ सय रुपैयाँ चोरेर तेक्वान्दोमा भर्ना भएका विष्टले ड्रेस पनि ‘काकालाई थाहा नदिनू’ भन्दै त्यही स्कुलको ड्रेस सिलाउने पसलमा सिलाए अनि तेक्वान्दो खेल सुरु गरे ।
त्यही खेलले दीपक विष्टको परिचय फेरिदियो । उनी मुलुककै शिर उँचो राख्ने कीर्तिमानी दीपक विष्ट बने । उनको नाम मात्र चम्किएन, देशको गौरव पनि बढेको छ ।
पहिलो दिनमै गुरुको झापड
यसरी काकाको स्कुलबाट चोरेको ३ सय रुपैयाँले तेक्वान्दो भर्ना गरेर हौसिएका विष्ट स्कुलकै ड्रेस सिलाउने टेलरिङबाट ड्रेस सिलाएर धनगढीको कभर्ड हलमा तेक्वान्दो सिक्न पुगेका थिए ।
उनी तेक्वान्दो कक्षा पुग्दा केही समय ढीलोगरी पुगे । कक्षामा ७०-८० जना खेलाडी थिए । गुरु थिए गोविन्द बिष्ट ।
सेतो ड्रेसमा सेतै पेटी (ह्वाइट बेल्ट) बाँधेका अग्ला कदका खेलाडी उनी मात्र थिए ।
उनीभन्दा उमेरदेखि शारीरिक रुपमै होचा खेलाडीहरु कसैको कम्मरमा पहिलो पेटी ‘एल्लो बेल्ट’ थियो । कसैको हरियो ‘ग्रिन बेल्ट ।’ उनी आफू ठूलो भएर पनि ह्वाइट बेल्टमै तेक्वान्दो खेल्न पुगेकामा मनमनै ‘नर्भस’ थिए ।
त्यसमाथि उनी उभिएकै ठाउँमा गुरु गोविन्द विष्ट आए । सिधै उनलाई झापड लगाए । उनी रातो, पिरो भए तर किन झापड लगाए, त्यो दीपकलाई थाहा भएन ।
उनी भन्छन्, ‘एक त सबैभन्दा ठूलो भएर तेक्वान्दो सिक्न पुगेको म मात्र थिएँ । त्यसै पनि लाज लागेको थियो । त्यसमा गुरुले सिधै झापड हानेपछि पूरै नर्भस भएँ’, विष्ट थप्छन्, ‘यसरी झापड हानेर गुरुले तेक्वान्दो खेल्न आउने, करातेको ड्रेस लाउने ? भनेर सोधे ?’
‘अनि झस्किएर सोचेँ, कराते र तेक्वान्दो भन्ने २ विधाका खेल रहेछन् । यो त करातेको ड्रेस पो रहेछ भनेर सिलाउने ठाउँ पुगेँ र तेक्वान्दोकै बनाएर फेरि आधा घण्टापछि फर्किएँ ।’
त्यो पहिलो दिनमा नै तेक्वान्दो कक्षाको लाइनमा गुरुको झापड खानु नै आफ्नो तेक्वान्दो करियरको सुखद भविष्य भएको विष्टको भनाइ छ ।
‘तेक्वान्दोले नै मलाई चिनाएको हो । यति मात्र होइन, मेरो आर्थिक अवस्थादेखि सबै कुरा तेक्वान्दोले दियो । त्यसमा पनि पहिलो दिनमा नै गुरुले हान्नुभएको त्यो झापड मेरा लागि आशीर्वाद बन्यो’, विष्ट भन्छन् ।
उसो त, तेक्वान्दो खेल्न सही सल्लाह दिने साथी केशव भट्ट र काका डम्बरबहादुरकै साथी तेक्वान्दोका गुरु गोविन्द विष्ट हुनु पनि आफ्नो तेक्वान्दो करियरको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।
खेल सुरु गरेदेखि नै पछि फर्किनुपरेन
२०५२ सालदेखि तेक्वान्दो सुरु गरेका विष्टले त्यसको ४ महिनामै टीकापुरमा भएको क्षेत्रीय प्रतियोगिता जिते ।
त्यसबेला उनी तेक्वान्दोको ह्वाइट बेल्ट पूरा गरेर यल्लो बेल्टमा पुगेका थिए ।
क्षेत्रीय प्रतियोगिता जितेका उनले त्यही वर्ष हेटौँडामा भएको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि जीत हात पारेर च्याम्पियन बने ।
उनको खेल यात्रा झन् उकालो लाग्दै गयो । नेपालमा भएको सन् १९९९ को दक्षिण एसियाली खेल (साग)मा नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाए उनले ।
त्यसपछि उनले लगातार सन् २०१० को सागसम्म ४ स्वर्ण पदक जित्दै दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा लगातार ४ स्वर्ण जित्ने देशकै कीर्तिमानी खेलाडी बने ।
त्यतिमै उनको जीतको शृङ्खउला रोकिएको थिएन । सियाडमा २ कास्य जित्दै छनोट चरण पार गरेर सन् २००८ को चीनको बेइजिङ ओलम्पिकसम्मको यात्रासमेत पूरा गरे विष्टले ।
१७ फागुन २०७१ देखि सक्रिय खेल जीवनबाट संन्यास लिएका विष्ट अहिले राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रशिक्षकको भूमिकामा छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १०, २०७७, ०७:४६:००
पहिलो पटक उपत्यकामा खटिएका २ प्रहरीमा कोरोना पोजिटिभ